माधव नेपालको नयाँ पार्टी १६३ नम्बरमा दर्ता , के छ नाम ? - Mitho Khabar
June 23, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on माधव नेपालको नयाँ पार्टी १६३ नम्बरमा दर्ता , के छ नाम ?
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको योजनामा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भएको खुलेकव छ । निर्वाचन आयोगमा नेपाल समूहका विद्यार्थी नेता जीवन राई अध्यक्ष रहेको नयाँ दल जेठ ३० गते दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत) नाम गरेको नयाँ पार्टी आयोगमा जेठ ३० गते दर्ता भएको हो । उक्त पार्टीको चुनाव चिह्न कलम राखिएको छ । गत वैशाखमा राईले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । नयाँ दलको दर्ता नम्बर १६३ रहेको छ ।
करिब दुई दशक अनेरास्ववियुको राजनीतिमा संलग्न राई अघिल्लोपटक वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबाट अनेरास्ववियुको उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि जिम्मेवारीविहीन थिए । नेता नेपालले उनलाई नै अघि सारेर पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिन लगाएको बताइएको छ ।
नयाँ प्रस्तावित पार्टीमा २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र पाँच सदस्यीय पदाधिकारी छ । उपाध्यक्षमा कास्कीकी कल्पना गुरुङ, महासचिवमा काभ्रेका विनोद खुलाल, सचिवमा ऐनविक्रम कुँवर र कोषाध्यक्षमा अर्घाखाँचीका सुशील खनाललाई राखिएको छ ।
गत ६ जेठमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाल समूहका तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार डा. खिमलाल देपकोटा कलम चिह्नबाटै विजयी भएका थिए । तर, देवकोटाले स्वतन्त्र सांसदका रूपमा कलम चिह्न रोज्नु संयोग मात्र नभएको राजनीतिक वृतमा चर्चा चलिरहेको छ । देवकोटालाई माधव नेपालले नै उम्मेद्वार अघि सारेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको अन्तर्संघर्षमा कुनै पनि वेला नेपाल समूह अलग्गिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले पूर्वयोजनाअनुरूप नै नेपालनिकट युवाहरूले आयोगमा पार्टी दर्ता गराएका हुन् ।
दर्ता भएको नयाँ पार्टीका एक पदाधिकारीले अनलाइनपानासँगको कुराकानीमा भने, “कार्यदलका नाममा अलमल्याउँदै जाने र चुनाव आउन थालेपछि दल दर्ता गर्नै नमिल्ने अवस्थामा ओलीका तर्फबाट दलविहीन बनाउने षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ भनेरै पार्टी दर्ता गरिएको हो ।” तर, अध्यक्ष राईले भने कुनै नेताको योजनामा पार्टी दर्ता गरेको कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
एमालेको अन्तर्विरोध चर्किएर पार्टी फुटको दिशामा अगाडि बढिरहेका बेला नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्न लगाएको खुलेको हो । नेपाल समूहकै नेता रहेका नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यले पनि हिमाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने यक्ष प्रश्‍नमा राजेन्द्र बानियासँग कुरा गर्दै सबैको सल्लाहमा नयाँ दल दर्ता गर्न लगाइएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “त्यो त हामी साथी भाईहरुले सल्लाह गरेर साथी भाइहरुले गरेका होलान् ।”
उनले सुरुमा पार्टी एकताबद्ध गर्नका लागि जिल्ला तहसम्म संगठन बनाइएको भए पनि अहिले आएर केही व्यक्तिहरुलाई छुट्टै पार्टीको लोभ जागेको बताएका छन् । यसअघि नेपाल समूहकै नेता भीम रावल र रामकुमारी झाँक्रीले ओलीसँग मिल्‍न सकिने कुनै सम्भावना नभएका कारण अलग पार्टी बनाएर जानुपर्ने बताएका थिए । सोही सेरोफेरोमा निर्वाचन आयोगमा नया पार्टी दर्ताका लागि वैशाख ७ गते निवेदन दिइएको थियो ।
ठूलो तामझामका साथ ०७४ को निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी गठबन्धनले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकिकरण गरे । पार्टी एकिकरणका समयमा नेकपा एमालेको अर्को समूह माधव नेपालसँग खासै छलफल नगरेका ओलीले नेकपा मा‌ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अढाइ वर्षको बार्गेनिङ गरे । उक्त बार्गेनिङमा ओली इमान्दार नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गए ।
जसको परिणाम प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याए । यसअघि पार्टी अन्तर्संघर्षकै क्रममा नेकपामा विवाद हुँदा केपी ओलीनिकट युवाहरूले एमाले दर्ता गरेका थिए । नेकपा एकता भंग भएपछि एमाले पुनः ब्युँतिएपछि दर्ता भएको एमाले स्वतः खारेज भएको थियो